မိတ္ထီလာမြို့တွင်ဖြစ်ပွားခဲ့သော ပဋိပက္ခများကြောင့် ၉,၀၀၀ ခန့်ရှိ | ရိုဟင်ဂျာ လူမျိုးစု အသံ
မိတ္ထီလာမြို့တွင်ဖြစ်ပွားခဲ့သော ပဋိပက္ခများကြောင့် ၉,၀၀၀ ခန့်ရှိ
မိတ္ထီလာမြို့တွင် ဖြစ်ပွားခဲ့သော ပဋိပက္ခများကြောင့် ခရိုင်အားကစားကွင်း၊ အမှတ် (၁) ရဲစခန်းနှင့် ဘုန်းတော်ကြီးကျောင်းများတွင် စုစုပေါင်း ဒုက္ခသည်ဦးရေ ၉,၀၀၀ ခန့်ရှိနေကြောင်း သတင်းရရှိသည်။အဆိုပါ ဒုက္ခသည်များအတွက် ရေနှင့် အစားအသောက်များ၊ အညစ်အကြေးစွန့်ရန် အိမ်သာများ လိုအပ်နေကြောင်း အဆိုပါဒုက္ခသည်များအား ကူညီဆောင်ရွက်ပေးနေသူများက ပြောသည်။
“ဒုက္ခသည်စခန်းမှာ မီးအသုံးပြုခွင့်မပေးဘူး။ အဲဒါကြောင့် အစားအသောက်ခြောက်တွေ၊ ရယ်ဒီမိတ်တွေပဲ စားသုံးနေတယ်” ဟု ဒုက္ခသည်များကို ကူညီဆောင်ရွက်ပေးနေသော အင်န်အယ်လ်ဒီပါတီမှ ကိုတေဇာက ပြောသည်။
Re-Post By ACM 23-3-2013
အေးချမ်းမွန် Credit & Copy From >> 7Day News Journal<< Thank
This entry was posted on March 23, 2013, in ပြည်တွင်းသတင်း. Bookmark the permalink.	Leaveacomment
← မိတ္ထီလာအရေးပေါ်မကြေညာမီနှင့်ကြညာပြီး အခြေအနေ(VOA) အင်တာဗျူး ….
လက်ရှိမြန်မာတွင် ဖြစ်ပေါ်နေသော အခြေအနေ အရပ်ရပ်ကို လေ့လာသုံး သပ် →